Isayithi elisemthethweni 1xbet ungene ngemvume - 1xbet amabhonasi kanye Promo amakhodi
Isayithi elisemthethweni 1xbet
Ubhuki 1xbet ivulwe muva nje – phakathi 2007, naku-inthanethi ku 2011. Isikhathi esifushane kangaka, inkampani ibe ngomunye wabahlali abaphumelela kakhulu futhi abakhulu kunabo bonke emhlabeni. Ukuthandwa kubonakala ngomugqa omkhulu wokubheja kwezemidlalo, ama-coefficients aphezulu kanye nesixhumi esibonakalayo esikahle futhi esiqondakala kalula somthombo osemthethweni wewebhu. Phakathi kwabalingani bomkhiqizo kunezinkampani ezinkulu zemidlalo ezinjenge-Italian Serie A neSpanish La Liga.
Ngena ngemvume ku-siqu iKhabhinethi 1xbet
Landa uhlelo lokusebenza leselula le-iOS ne-Android
Izinhlobo zolimi zesayithi
Ukutholakala kwezigaba nama-appendices
Ibhonasi kudiphozi yokuqala
Wonke amabhonasi nezenyuso
Gcwalisa futhi idiphozi
Indlela ukukhipha imali 1xbet
Isiza esisemthethweni senkampani siyaqondakala futhi siyatholakala: umthunzi omkhulu wedizayini umhlophe futhi uluhlaza okwesibhakabhaka. Ukuzula isiza kwenziwa lula, zonke izinto ezidingekayo nezigaba zibonakala. Ingaphezulu lesiza ligcwele okuqukethwe kwezobuchwepheshe, lapho umsebenzisi exazulula izingqinamba zenqubo futhi enza ukukhohlisa: ukubhalisa, ukungena ngemvume, usebenzisa izinhlelo zokusebenza nezilungiselelo zesixhumi esibonakalayo.
Ngaphansi kancane kukhona izigaba zezinhlobo zemidlalo:
Ukubheja kwezemidlalo bukhoma.
Ngasohlangothini lwesobunxele kune-game block, lapho kutholakala khona ulwazi lokubheja bukhoma. Isigaba esibukhoma siqukethe imidlalo yezemidlalo ongabheja kuyo manje. Indawo yokusebenza yesiza itholakala kancane kwesokudla, nayi iphrofayli yomuntu siqu ye-1xbet. Ngezansi komthombo ulwazi olutholakalayo mayelana ne-1xbet nemithetho.
Umdlali futhi angafunda idatha mayelana:
oxhumana naye ehhovisi,
izinhlelo zokusebenza zeselula,
izinketho zokufaka nokukhipha ama-winnings.
Iwebhusayithi yenkampani enkulu inalo lonke ulwazi oludingekayo oludingwa ngumsebenzisi ngesikhathi somdlalo.
I-akhawunti yomuntu siqu yomdlali nayo ilula futhi iqondakala kalula. Ngesikhathi esifanayo, it has zonke izinketho ezidingekayo kanye nezici ukuphatha amaphuzu, ukubheja ne-akhawunti.
Ukungena ngemvume, umdlali angasebenzisa enye yezindlela eziphakanyisiwe:
Ukufinyelela okuyisisekelo kuphrofayela ye-BC. Lokhu okuhlukile kokugunyazwa okuthandwa kakhulu. Lapha udinga ukukhombisa ukungena ngemvume ne-password, ezenziwe ekuqaleni ngumdlali ekubhaliseni. Ukuya ekhasini lakho, ngendlela ekhethekile udinga ukufaka ukungena ngemvume ne-password yakho. Le mininingwane ingagcinwa kugajethi yakho noma uyibhale phansi. Lapho ukungena ngemvume kumdlali kungacacisa njengegama lomsebenzisi i-imeyili, iselula noma i-ID ye-akhawunti.
Ukugunyazwa ngocingo oluphathekayo. Lapho udala iphrofayili, isidlali kufanele sifake inombolo yocingo enikezwe i-akhawunti. Uma kunesidingo sokugunyaza ngocingo oluphathekayo, umdlali kufanele acacise kulayini wefomu lempendulo inombolo yakhe enamathiselwe kuphrofayela. Ucingo luzothola i-SMS enekhodi yokungena yesikhathi esisodwa. Le phasiwedi isebenza kuphela ngesikhathi sokungena ngemvume okukodwa. Kamuva lapho ungena ngemvume futhi uzodinga ukucela ikhodi entsha yesikhathi esisodwa.
Gunyaza ngokusebenzisa amanethiwekhi omphakathi. Lapho udala iphrofayili, ungabela eyodwa noma amaningi amanethiwekhi omphakathi kuphrofayela yakho. Ngokwesibonelo, Facebook, Twitter, Instagram. Ukuze wenze lokhu, kufanele ufake ukungena ngemvume nephasiwedi yephrofayili kwinethiwekhi yokuxhumana nomphakathi. Ngemuva kwalokho uzoya ngokuzenzakalela kuphrofayili yakho yangasese.
Wonke umuntu obhejayo angalanda inguqulo yeselula mahhala. Le nketho ikuvumela ukuthi usebenzise noma yiziphi izinsizakalo ze-BC usebenzisa ifoni noma ithebhulethi yakho. 1Inguqulo yeselula ye-xbet ivumela:
Bukela noma imuphi umdlalo ozikhethele wona.
Thola ukwaziswa ngemidwebo yomqhudelwano.
Buka uhlu lwemicimbi.
Lawula izinguquko kumanani.
Ukubheja kunoma yimuphi umphumela.
Ukufaka imali ku-akhawunti nokukhipha ama-winnings.
Sebenzisa imivuzo, ukukhushulwa kanye namakhodi wokukhushulwa.
Xhumana nochwepheshe bezobuchwepheshe.
Ukufeza okuyinhloko konjiniyela be-1xbet nenguqulo yeselula kuthathwa njengokuxhumana okungami 24 amahora ngosuku. Akukho ukwehluleka, ukuphahlazeka, Ukuxhumeka kwe-inthanethi noma amaphutha ngesikhathi sokusetshenziswa. Ukubheja ngakunye kuzokwenziwa futhi kubalwe kahle ngangokunokwenzeka. Ngenxa yokusebenzisa ngokugcwele isoftware yamakhasimende uqobo, izosebenza kunoma iyiphi idivayisi kungakhathalekile ukuthi imodeli injani.
Ihhovisi ligxile kuzicelo zeselula. Amakhasimende angasebenzisa izinhlobo ezimbili zesoftware ephathekayo, yamadivayisi asuselwa ku-Android naku-iOS, ngokusebenza okufanayo kwanamuhla futhi okusheshayo. Uhlelo lokusebenza lweselula aluhlukile kunhlobo oluphelele lwensiza yewebhu. Abasebenzisi bangenza izenzo zabo ezijwayelekile:
Bhalisa i-akhawunti esizeni.
Bona izibalo zakho.
Yenza ukubheja kwezemidlalo.
Isoftware yamakhasimende eselula ivumela umsebenzisi, nokuba kuphi emhlabeni, ukubheja, futhi yenza lula le nqubo, ngoba ayidingi isiphequluli, futhi konke okudingekayo kumdlalo kusendaweni eyodwa. Uhlelo lokusebenza olusemthethweni lwe-iPhone ne-Android lungalandwa kuwebhusayithi esemthethweni ye-1xbet. Abasebenzisi abakwazi ukukhathazeka ngokuphepha kwabo, njengoba uhlelo luhlangabezana nawo wonke amazinga.
Ukwakha iphrofayli ku-1xbet yisinyathelo esiyinhloko sokuqinisekisa umsebenzisi isimo seklayenti. Ukubhalisa kunezinyathelo ezimbili: ukudala iphrofayili nokuqinisekiswa okulandelayo kolwazi lomuntu siqu lomsebenzisi. Njengoba ihhovisi lisebenza ngokungemthetho ezimakethe eziningi, inqubo yokubhalisa yenziwa lula futhi ayinazidingo ezithile.
Abasebenzisi banezindlela ezine zokubhalisa:
Ake sihlaziye zonke izindlela ngokuningiliziwe:
Ukubhalisa nge-imeyili kuyindlela ende kunazo zonke futhi enzima kakhulu yokwakha iphrofayili, kepha ngokushesha inika umdlali ukufinyelela ekusebenzeni kwesayithi. Okokuqala, udinga ukungena ezweni, isifunda, idolobha, igama eligcwele, imali, i-imeyili kanye nenombolo yocingo, kanye nokwakha ikhodi yokufinyelela. Chofoza le “Ukubhalisa” inkinobho. Kuzothunyelwa isixhumanisi ekhelini elicacisiwe le-imeyili lapho kufanele uye khona ukuqedela ukubhalisa nokuqinisekiswa komsebenzisi. Ngemva kwalokho, ungenza idiphozi kubhalansi yomdlalo futhi wenze ukubheja.
Ukubhaliswa okusheshayo kwe-akhawunti yomuntu siqu ku- 1 click kushesha kakhulu. Kuyafaneleka kulabo abangafuni ukuchitha isikhathi futhi abafuna ukuqala ukubheja ngokushesha. Ukuze udale i-akhawunti ngokushesha, khetha ifayela le- “Chofoza okukodwa” indlela esizeni sehhovisi. Cacisa izwe, lwemali bese uhlola inkambu yokuvikela ogaxekile. Chofoza “Bhalisa”. Ewindini elivelayo, uzobona inombolo ye-akhawunti yakho nekhodi yokufinyelela ekhiqizwa ngokuzenzakalela. Kamuva ungashintsha iphasiwedi yakho kufayela le- “Ulwazi lomuntu siqu” ingxenye.
Uhlelo luzonikela ukonga inombolo nenombolo yokungena kudivayisi yakho ngefayela noma ngesakhiwo sesithombe noma ukuthumela lolu lwazi ku-imeyili. Lokhu ukuphela kokubhaliswa – ungafaka ibhalansi yakho bese uqala ukubheja. Ukukhipha imali bese uthola umvuzo wokwamukela, kufanele ugcwalise imininingwane yakho yangasese emikhakheni ekhonjisiwe bese uqinisekisa iphrofayili yakho.
Ukwakha iphrofayili ngenombolo yocingo
Inzuzo enkulu yalolu khetho ukuvikelwa okuphezulu kwephrofayili yakho. Ukwakha i-akhawunti ku-1xbet usebenzisa ifoni yakho ephathekayo, khetha le ndlela ngemuva kokuchofoza kufayela le- “Bhalisa” inkinobho. Cacisa izwe lakho nenombolo yakho yocingo kufayela le- “Inombolo yocingo” inkambu. Khetha imali yakho futhi uzivikele kogaxekile, bese uchofoza ku “Bhalisa”. Faka inombolo kusuka ku-SMS enkambeni evelayo. Ngemuva kwalokho uzokwazi ukushintsha ikhodi yokufinyelela bese ugcwalisa imininingwane yakho.
Ukwakha iphrofayli ngokusebenzisa amanethiwekhi omphakathi
Ukwakha iphrofayli ngokusebenzisa amanethiwekhi omphakathi, chofoza inkinobho yokuxhumana nomphakathi nezithunywa. Ngezansi uzobona iwindi lokukhetha imali nohlu lokuxhumana nabantu. Ungabhalisa nganoma iyiphi ingosi yokuxhumana nabantu ngokuchofoza inkinobho efanelekile. Ngemva kwalokho, Gcwalisa izikhala, ngaphandle kwalokho kuzoba nzima ukukhipha imali ngokuzayo.
Ukubhaliswa okunethezeka okuvela kuselula
Kubanikazi bama-smartphones namathebulethi i-BK inikeza izinhlelo zokusebenza zeselula ze-Android ne-iPhone, kanye nesayithi elihambayo. Zonke izinhlobo zeselula zinokusebenza okufana nokwesiza sedeskithophu – lapha ungabhalisa i-akhawunti, yenza imali futhi uhoxe, futhi wenze ukubheja futhi ubuke ukusakazwa bukhoma.
Ukwakha iphrofayli ngohlelo lokusebenza
Ungalanda uhlelo lokusebenza lwe-Android ne-iPhone emthonjeni osemthethweni we-1xbet. Izicelo zingalandwa kusiza esisemthethweni senkampani yokubheja mahhala. Ukubhalisa iphrofayli ngohlelo lokusebenza lweselula, chofoza ku “Ukubhalisa” phezulu kwesikrini. Hlola enye yezinketho ezine zokubhalisa ngenhla, bese ulandela imiyalo.
Ukwakha iphrofayili ngesayithi leselula
Ukwakha iphrofayli kusayithi leselula akuhlukile nokubhalisa kwinguqulo yedeskithophu noma kuhlelo lokusebenza lweselula. Kukhona nokubhalisa ngokuchofoza okukodwa, nge-imeyili, ngokusebenzisa amanethiwekhi omphakathi nangezinombolo zocingo.
Inqubo yokuqinisekisa yenziwa ngekholi yevidiyo. Ngokuvamile isevisi yokuphepha ye-1xbet ingacela umsebenzisi ukuthi ethule ama-passport angama-elektroniki anesithombe. Ngesikhathi sokuqinisekisa, izidingo zesithombe kufanele zihlangatshezwe, okufanele zifane nalezo ezitholakala emabhange lapho kukhishwa amakhadi.
Isayithi lifinyelela izithameli eziningi. Izakhamizi zamazwe ahlukene zingasebenzisa isiza. Ngaphezu izinguqulo Russian and English, kunabanye abaningi. Izakhamizi zaseBelarus, I-China, ILatvia, INgilandi, IGrisi, Melika, I-Italy, EJalimane, ENorway, E-Australia, IBrazil namanye amazwe bangasebenzisa isayithi ngolimi lwabo lwendabuko. Inkampani inikeza inani eliphelele le- 52 izinhlobo zomthombo wewebhu. Ungabhalela iqembu lokusekela ngezilimi ezahlukene. Uma ukhuluma isiRashiya, IsiNgisi noma olunye ulimi, ngeke ube nobunzima ngokuxhumana.
Lapho ubhalisa i-akhawunti esizeni, ungakhetha eyodwa ye- 100 zezimali, kufaka phakathi ama-cryptocurrensets. Imvamisa kwenzeka ukuthi abasebenzisi bayashesha ngokukhetha imali lapho bebhalisa bafuna ukushintsha ukukhetha. Kukhona nezinye izizathu, Ngokwesibonelo, isilinganiso sokuguqulwa lapho kugcwaliswa ibhalansi yegeyimu asifanele. Uma ngokungazelelwe uthathe isinqumo sokushintsha imali, bhala ukweseka, futhi ochwepheshe baxazulula inkinga yakho ngokushesha.
1i-xbet iyinsiza elula futhi ecacile, yakhelwe okumhlophe nokuhlaza okwesibhakabhaka.
Phezulu kwekhasi eliyinhloko kukhona zonke izinketho zobuchwepheshe lapho umsebenzisi ngamunye angakwazi ukwengeza isayithi ngokuya ngokuthanda kwabo. Ingxenye engezansi yekhasi imema umsebenzisi ukuthi akhethe isigaba esisodwa:
Ngakwesokunxele sekhasi isigaba sokudlala, lapho ungathola khona ulwazi mayelana nokubheja kwamanje. Esigabeni esibukhoma kunemicimbi eminingi evela kwezemidlalo, namakhasimende angenza ukubheja khona manjalo. Uhlangothi olungakwesokudla yindawo yokusebenza yomsebenzisi, lapho ulwazi olumayelana ne-akhawunti lutholakala khona. Ingxenye engezansi yekhasi – imininingwane ngehhovisi kanye nemithetho yokubambisana, kanye nemininingwane yokuthi yiziphi izinhlobo zokubheja ezingenziwa, ungaxhumana kanjani nabamele abesekelo lobuchwepheshe noma usebenzise uhlelo lweselula.
1Inkampani ye-xbet ijabulisa njalo amaklayenti ayo ngezibuyekezo zokubheja nokuqukethwe komdlalo. Ngaphezu kokujwayelekile okukodwa noma ukuvezwa, kungenzeka ukwenza ukubheja okuningi noma i-anti-express.
Izinhlobo kubhejwa atholakale kumakhasimende we 1xbet:
Ukubheja okuningi – ukuveza okuningana nokubheja okukodwa kuhlanganiswe ngenhlanganisela efanelekile kwiklayenti ngalinye.
Ukubheja okunemibandela yimibukiso ezimele komunye nomunye. Umbambiqhaza anganqoba kumcimbi owodwa noma emicimbini eminingana ngasikhathi sinye.
I-Aniexpress iphikisana ne-expression eyaziwayo: umsebenzisi uzowina kuphela uma okungenani omunye wemicimbi ekubhejeni uyolahlekelwa.
Unenhlanhla – uhlobo lokubheja, lapho ukhetha ukuthi iyiphi ongayinquma ngaphezu kwemicimbi emithathu.
I-Patent ukubheja okukhethekile okuhlanganisa ukuvezwa kwangempela kwemicimbi eminingana ngasikhathi sinye.
Amalungu amasha ehhovisi lobhuki amenyiwe ukuthi asebenzise ithuba eliyingqayizivele lokuphinda kabili ibhalansi yemidlalo ngokugcwalisa i-akhawunti ngenani elithile. Ukufaka imali esele kuzodingeka wenze izenzo ezimbalwa ezilula:
Bhalisa kuwebhusayithi esemthethweni yezinkampani.
Gcwalisa ifomu ngolwazi olusesikhathini.
Faka imali yebhalansi yomdlalo.
Amaphoyinti ebhonasi azoklonyeliswa ngokuzenzakalela.
Ungawasebenzisa ngokunenzuzo lo mnikelo kanye kuphela. Ukukhipha ikhadi lakho lasebhange, kufanele udlale inani eligcwele lamaphoyinti amahlandla amahlanu nge-expression.
Amaklayenti esayithi anikezwa ukukhushulwa kanye namabhonasi anhlobonhlobo, ethandwa kakhulu okuyi-:
Phinda ufake amabhonasi. Labo asebevele benza ukubheja bangathola imivuzo ngokufaka i-akhawunti yomdlalo okwesibili nangezikhathi ezilandelayo.
NgoLwesithathu – phindaphinda ngababili. Kubalulekile ukubheja ngoMsombuluko nangoLwesibili – kuphela ngaphansi kwalesi simo kungenzeka ukubamba iqhaza ohlelweni. Inani eliphakeme lomvuzo lisethwe yinkampani uqobo.
ULwesihlanu onenhlanhla – ubukhulu bediphozi buzophindwa kabili, inqobo nje ukuthi ukufaka imali kwenzeke ngoLwesihlanu. Ukubamba iqhaza kuhlelo kungenzeka kuphela uma iklayenti lingeyona ilungu lokunye ukukhushulwa.
Ukubuyiselwa kwemali kwe-VIP. Uhlelo lokuthembeka lwamakhasimende enkampani lunikeze ithuba lokubuyisa ingxenye yemali. Inani lembuyiselo lixhomeke ngqo ezingeni lekhasimende. Kukhona ingqikithi ye- 8 amazinga esizeni, eyokuqala eyithusi. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi uhlelo lusebenza kuphela uma idiphozi yenziwa ngohlelo lweRoyal Pay. Inani lembuyiselo yemali liyahlukahluka kuye ngokuthi 5 uku 11%.
Shaya ubhuki. Iklayenti lingathola amabhonasi ngokulwa nabamele inkampani.
Impi yongoti, lapho umklomelo omkhulu uyimoto.
Ngaphezu kwalokho, amakhasimende athola amabhonasi wokuzalwa ngamanye, futhi bangenza nokubheja kusengaphambili. Kunzima impela ukulawula ukubukeka kokunikezwa okusha nokukhushulwa, ngakho-ke kunconywa ukuthi ubhalisele i-newsletter: zonke izinto ezintsha zizotholwa nge-imeyili, ikheli elicacisiwe lapho kubhaliswa.
Ukubheja inkampani 1xbet inkampani esebenzayo ukuthi ihlose hhayi kuphela ukuheha abadlali abasha, kodwa futhi nokugcina abasebenzisi abanolwazi.
Ukubheja esizeni sehhovisi likabhuki kungabahlali bamazwe ahlukene, ngakho-ke kunezinhlobo ezingaphezu kwezingamashumi amahlanu zezimali ezitholakalayo zokuthengiselana kwezezimali. Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi ukukhethwa kwemali kwenziwa ngesikhathi sokubhalisa; ngeke kwenzeke ukushintsha imali ngokuhamba kwesikhathi.
Ungafaka i-akhawunti yomdlalo kunoma iyiphi imali, kungakhathalekile ukuthi kwakukhethwe ini ekuqaleni: uhlelo luzoguqula ngokuzenzakalela lapho lufaka.
Idiphozithi ku-akhawunti yomdlalo ingenziwa ngezindlela ezihlukile: umsebenzisi ngamunye angakhetha indlela elula yokwenza idiphozi kumakhulu atholakalayo. Uhlu luye ngezwe lapho iklayenti lihlala khona.
Okudumile njalo sebenzisa amakhadi asebhange, izinhlelo zokukhokha ngogesi, shaja ngo-opharetha weselula, ukudluliswa okuqondile kwebhange.
Ukuze ukhiphe imali kwi-akhawunti yokudlala yeklayenti, udinga ukungena ohlelweni bese ukhetha ithebhu efanelekile kukhabethe lakho lomuntu siqu. Ngemva kwalokho, umsebenzisi uzokwazi ukufinyelela izindlela angazisebenzisa okwamanje.
Ungadlulisa ama-winnings aye ku-:
Sebenzisa ukubhenka online.
Ngisho nalawo maklayenti abamba iqhaza ekubhejeni nasekudlaleni imidlalo, kodwa wenqaba ukudlula kwinqubo yokubhalisa, ingasebenzisa ithuba lokuhoxa.
Imisebenzi yenkampani ingenxa yokuba khona kwelayisense esemthethweni ekhishwe nguhulumeni walesi siqhingi, etholakala oLwandle lweCaribbean.
Iwebhusayithi esemthethweni yenkampani ishicilela njalo izindaba zakamuva nemicimbi yamanje. Ukuze uhlale wazi konke okwenzekayo, Kunconywa ukubhalisa kusayithi bese ubhalisela iphephandaba. Ukwenza kanjalo, kubalulekile ukucacisa ikheli le-imeyili elivumelekile. Njengomthetho, umbiko wezindaba uqukethe imininingwane mayelana nokuhluleka kwesistimu okungenzeka noma ukunikezwa okusha kwephromoshini, lapho ungathola umvuzo owengeziwe.
Indlela ukugembula at 1xbet?
Ukwenza ukubheja kokuqala kuzodingeka uye kuwebhusayithi esemthethweni yenkampani, bhalisa futhi wenze idiphozi yokuqala ku-akhawunti yokudlala.
Amaklayenti esayithi anikezwa izinhlinzeko eziningi zamabhonasi: kusuka emiphumeleni yokufaka ekubhaliseni kuya ekudonselweni ezimotweni. Ukunikezwa kwamanje kushicilelwa njalo kuwebhusayithi yenkampani.
Uyikhipha kanjani imali kwi-akhawunti?
Ukuze ukhiphe imali kwi-akhawunti yokudlala, udinga ukukhetha inketho engcono kakhulu yohlelo lokukhokha futhi ulandele ngokuqinile izinyathelo ezichazwe kumiyalo kuwebhusayithi kabhuki.
Indlela ngemvume ukuze 1xbet kusuka kwikhompyutha yakho?
Ukuze uvule i-akhawunti yomuntu siqu, uzodinga ukuya kuwebhusayithi esemthethweni yehhovisi. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi abanikazi be-akhawunti yilabo kuphela abasebenzisi ababhalisile ohlelweni. Uma umsebenzisi angene ngemvume okokuqala ngqa, isikhathi sokufinyelela ku-akhawunti sizonqunyelwa, kanye nohlu lwemisebenzi engasetshenziswa. Uma iklayenti libhalisile ngaphambilini, okuwukuphela kwento esele ukuyenza ukufaka ukungena ngemvume ne-password bese ungena ngemvume kusayithi.
Kusho ukuthini: inombolo yakho yocingo ayitholakali ku-1xbet?
Ngenkinga enjalo njengenombolo yocingo yokucinga iphutha kusistimu ye-1xbet evame ukuhlangana nabasebenzisi bensizakalo: bobabili abaqalayo nabachwepheshe. Umlayezo ukhombisa ukuthi akunakwenzeka ukuzisebenzisa ngokugcwele zonke izinsizakalo zenkampani okwamanje. Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi ekwenzeni ukuthengiselana kwezezimali.
Umsebenzisi obona umlayezo wokuthi inombolo yefoni ayilungile, okungasetshenziswanga noma okungatholakali kubhekwa njengekhasimende elingaqinisekisiwe ohlelweni, ngakho-ke akavunyelwe ukusebenzisa izinketho ezithile aze aqede inqubo.